lulu: မျက်နှာပန်းလှစေမယ့် ချစ်စရာ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းလေးများ
မျက်နှာပန်းလှစေမယ့် ချစ်စရာ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းလေးများ
at 2:29 PM Labels: မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ချက်ပြုတ်ဟင်းလျာများ, အချိုပွဲ
မတွေ့ဖြစ်တာ အတော်ကြာပေမယ့် မာင်နှမများအားလုံးကို အမြဲသတိရလျက်ပါနော်။
မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်မှာ ဟင်းလျာအသစ်တွေ မတင်ဖြစ်ပေမယ့် အမြဲတမ်းလာရောက် အားပေးနေတဲ့ မောင်နှမတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါနော်။
ဒီနေ့တော့ မောင်နှမတွေကို မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် ဆနွင်းမကင်းလုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးပါရစေဦးနော်။
တစ်နေ့လည် ကျွန်မ ရုံးမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့အတူ နေ့လည်စာစားနေရင်း ညီမလေး တစ်ယောက်က ကျွန်မကို ပူဆာပါတယ်။ အမရယ့့့်  ညီမလေးကို ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းလေး လုပ်ကျွေးပါလာ့း့့
အမအလုပ်များတာသိပေမယ့် ဗန်းသေးသေးလေးနဲ့တစ်ယောက်စာလောက်ပဲဖစ်ဖြစ် လုပ်ကျွေးပါ လားဟင်တဲ့့့ 
ကျွန်မလည်း လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးကလည်း အသင့်ရှိ၊ ဂျုံမှုန့်၊ အုန်းသီး၊ သကြား၊ ထောပတ်စတာတွေလည်း အသင့်ရှိတာနဲ့ ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်ကျရင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေး လိုက်ပါတယ်၊ လုပ်မယ့်လုပ် တစ်ယောက်စာတော့မဟုတ်ဘူးနော်၊ အားလုံးစားလို့ရအောင် တစ်ခါတည်း များများလေး လုပ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ အခြေချနေရတာမို့ မုန့်ဖုတ်ရမယ့် ဗန်းလည်းမရှိ၊ အပေါ်မီးအောက်မီးနဲ့ ဖုတ်ရမှာ မို့ မုန့်ဖုတ်ရမယ့်ဗန်းကို Capital မှာ အပြေးသွားဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ စစချင်း မုန့်လုပ်တုန်းက မီးသွေးနဲ့ အပေါ်မီးအောက်မီးဖုတ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ မီးဖိုဆောင်လေးထဲမှာ မီးသွေး ဖိုမွှေးလိုက်ရင် ညစ်ပတ်သွားမှာစိုးတာနဲ့ပဲ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ အရင် စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြည့်ရာကနေ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မုန့်လေးမို့လို့ မောင်နှမတွေအတွက် လည်း မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
ရခိုင်ငှက်ပျောသီး တစ်ဖီး၊ ဂျုံမှုန့် ၁၅ ကျပ်သား၊ အုန်းသီး တစ်လုံး၊ ထောပတ် ၁၀ ကျပ်သား၊ သကြား ၁၀ ကျပ်သား၊ (အချိုအရသာ ပါဝင်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ထည့်နိုင်ပါ တယ်နော်) ဆားအနည်းငယ်၊ မုန့်လုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ပန်းရောင်အမှုန့်နဲ့ ဘိန်းစေ့တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အုန်းသီးကိုခြစ်ပြီးတဲ့အခါ အုန်းနို့ရည်ညှစ်ယူထားပြီး အုန်းသီးဖတ်တွေကို ဖယ်ထားပါ။ ငှက်ပျော သီးကို အခွံနွှာပေးထားပါ။ ပြီးတဲ့အခါ ဇလုံကြီးကြီးတစ်လုံးကို ယူပြီးတော့ ဂျုံမှုန့်၊ ငှက်ပျောသီးရယ်၊ အုန်းနို့ ရည်ရယ်၊ အုန်းသီးဖတ်ရယ်၊ ထောပတ် သုံးပုံနှစ်ပုံရယ်၊ ဆား၊ သကြားတို့ကို ထည့်ပြီး သမအောင် နာနာ နယ်ပေးပါနော်။ နယ်တာသမသွားပြီဆိုရင်တော့ နယ်ထားတဲ့မုန့်ထဲကို ပန်းရောင်မှုန့် ထည့်ပြီး ရောနယ်ပေးပါနော်။
ပြီးရင် ပုံစံခွက်လေးတွေကို စုတ်တံလေးနဲ့ ထောပတ်တွေကို သုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဘိန်းစေ့လေးတွေဖြူးပေးပါ။ ပြီးတော့မှမုန့်နှစ်လေးတွေကို ပုံစံခွက်ရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ ၃ မိနစ်အပူပေးလိုက်ပါ။ အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ မုန့်လေးတွေ ပွတက်လာပါ လိမ့်မယ်။ ၃ မိနစ်အပူပေးပြီးတဲ့အခါကျရင် မုန့်တွေကို ကြွေပန်းကန်ပြားထဲ မှောက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ နောက်ထပ် ၇ မိနစ် အပူပြန်ပေးပါ။ မုန့်သားကျက်မကျက်ကို သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ မုန့်ကို ထိုးကြည့်ပါ။ မုန့်သားတွေက သွားကြားထိုးတံမှာ ကပ်ပါမလာဘူးဆိုရင် မုန့်ကျက်ပါပြီနော်။ တကယ်လို့ ကပ်ပါလာ တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် ၂ မိနစ်လောက် အပူထပ်ပေးလိုက်ပါနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ အနံ့အရသာနဲ့ လည်း ပြည့်စုံ၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံခွက်လေးနဲ့ လှပဆန်းကြယ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်းလေးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။
အလှူမင်္ဂလာပွဲများအတွက်ဆိုရင်တော့ အမြင်လည်းလှပြီး လှီးရတာ အတုံး မညီမှာ၊ မုန့်သား ပဲ့ထွက်သွားမှာ မစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် သိပ်ကို မျက်နှာပန်းလှစေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်စစ်စစ်ပါ။ မီးသွေး မီးဖိုမရှိတဲ့ မောင်နှမတွေအတွက် သိပ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မီးသွေးပြာတွေလွင့်ပြီး မီးဖိုဆောင် ညစ်ပတ်မှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့သလို မီးသွေးနဲ့ဖုတ်ရသလို အကျက်မညီမှာတို့၊ မုန့်တူးသွားမှာတို့ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးလေ။
ကျွန်မတို့မောင်နှမများလည်း မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးဆနွင်းမကင်း လေးကို အဆင်းရော အနံအရသာပါ ပြည့်စုံစွာနဲ့ စားသုံးနိုင်ဖို့အတွက် ပိတ်ရက်မှာ လုပ်စားကြပါဦးစို့လားနော်။
ချစ်စဖွယ်မုန့်ပုံစံလေးတွေရခဲ့တာကတော့ ရပ်ဝေးမြေကနေ ပုံစံခွက်လေးတွေကို ကျွန်မဆီ တကူးတကပို့ပေးရှာတဲ့ မုန့်စိမ်းပေါင်းမဖြစ်ရင် အိပ်လို့မပျော်ပါဘူးပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ညီမလေး မာရီယာပါနော်။ ညီမလေးမာရီယာကိုလည်း မုန့်ပုံလှလှလေးတွေရအောင် ပုံစံခွက်လေးတွေ သတိတရနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Margaret Joe August 24, 2011 at 2:51 PM
Cameron August 24, 2011 at 3:00 PM
မလုပျောက်နေတာကြာပြီ....။ ငှက်ပျောစနွင်းမကင်းလုပ်နည်းလေးက လွယ်သားပဲ အိမ်မှာလုပ်ကြည့်ဦးမယ်... ကျေးဇူးအမ..။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 24, 2011 at 5:07 PM
မလုလုရဲ့ ဟင်းလေးတွေ မျှော်ရတာ အမော
rose August 25, 2011 at 2:27 AM
ဟုတ်တယ်နော်... အပေါ်မှာ အစ်မချော ပြောသလိုပဲ အစ်မလု ပျောက်နေတာ အကြာကြီးပဲ။ ရို့စ် ဘလော့ဂ် မဖွင့်ခင်တည်းက အမြဲ လာလာပြီး ချက်နည်းလေးတွေ ကြည့်တတ်လို့ အစ်မလုလုကို သိနေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး ဆနွမ်းမကင်းကို အလွယ် မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်နဲ့ လုပ်နည်းလေး ဝေမျှလို့ ကျေးဇူးပါ။ အစ်မ အချိန်ရှိမယ်ဆို အလေးချိန် ကျပ်သားကို ပြည်ပမှာဆို ဘယ်လိုတိုင်းရလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပါနော်။
စန္ဒကူး August 25, 2011 at 7:17 AM
လုပ်ကြည့်မယ်မမလု.. microwave နဲ့ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူး.. မြန်လဲ မြန်မယ်..း))
တယ်မိုက်တာဘဲ မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ လုပ်နိုင်မယ်.
ညီမနေကောင်းရဲ့လား မတွေ့ တာကြာလို့ လွမ်းလှတာ အခု ပြန်ရေးတော့ ၀မ်းသာလို့ 
SHWE ZIN U August 25, 2011 at 7:55 PM
ပျောက်ထာ အမ သတိရတယ် အမစီမှာ ညီမ ပိုစ် ကမတက် လို့ တခြားမှာ တွေ့လို့ လာဖတ်တယ်
ညီမ နေကောင်းပိုစ်တင်နိုင်တာ တွေ့လို့ ဝမ်းသာတယ်
Anonymous August 26, 2011 at 7:58 PM
လသာည August 26, 2011 at 8:56 PM
မလု မတွေ့တာကြာပြီ ဌက်ပျောသီးဆန္ဒမကင်းလေးနဲ့ ပြန်ပေါ်လာပြီ။ ကျေးဇူးနော်။
PAUK August 31, 2011 at 12:18 AM
လုလု August 31, 2011 at 3:21 PM
မ Margaret Joe၊ မိုးငွေ့၊ချော၊ rose၊ ကူးကူးနဲ့ မဆောင်းတို့ရေ့့့  လုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်။ လုပ်နည်းလေးက သိပ်လွယ်ပါတယ် နော်။
မဆောင်းနဲ့ မရွှေစင်ဦးတို့ရေ တကူးတကလာပြီး ကော်မန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ကျန်းမာရေးလည်း တော်တော်ကောင်းလာပါပြီနော်။
လသာညနဲ့ ပေါက်ကလေးတို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အလုပ်တွေလည်းရှုပ်၊ ဘလော့ဂ်ကလည်း ၀င်မရလို့ ပျောက်နေတာပါနော်။
အခု ရတုန်းခဏ ပို့စ်လေးတွေ တင်တာပါနော်။
အကြာကြီးပျောက်နေတာတောင် တကူးတက လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။
rose ရေ့့့ 
အလေးချိန်ကတော့ ၁ ကီလို = ၆၀ ကျပ်သားနဲ့ ညီမျှပါတယ်နော်။
Thanks Ma Ma Lu! I made banana cake with the microwave today. It is so efficient. God bless Ma Ma Lu!
MyaPwarAye November 22, 2011 at 8:48 PM
mu yar April 4, 2012 at 7:25 PM
အမလုပ်စားပြီးပါပြီ။ ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမကို ဌက်ပျောကောက်ညင်းထုတ် လုပ်နည်းလေးပေါးပါအုံးနော်။